Waxaan ahay wiil jira-14-sanno. Daryeelahayga wuxuu doonayaa in uu i dhunkado. Waxaan u malaynaa midaasi in ay tahay mid laga yaq-yaqsado ama la karaahiyeysto. Maxaa ila gudboon in aan sameeyo?
Daryeelahaaga looma oggola in uu ku dhunkado.
Dalka Jarmalka, dadku looma oggola in ay ka faa’ideystaan dadka daciifka ah.
Dadka daciifka ahi waa:
Dadka u baahan caawimaad iyo ilaalin uu qof kale bixiyo.
Sidaas darteeda asaga wuxuu sameeyay wax khalad ah oona mamnuuc ah.
U sheeg in aadan midaasi doonaynin.
Waa in uu midaasi aqbalo.
Haddii uu sidaasi kusii socodo, raadso caawimaad.
U sheeg daryeel bixiye kale ama qofka adiga masuulka kaa ah.
Haddii aysan ku rumeynin, raadi qofkale.
Illaa uu qof kaa caawiyo.
Dareemahaaga iyo sida aad dareentid waa mid caadi ah.
Waxaa laguu oggolyahay in aad dhahdid MAYA.